Famaranana ny fanamarihana ny faha 5 taonan’ny fiangonana Alasora - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
4 décembre 2011 admin alasora, fiangonana
Nofaranana tamin’ny fomba ofisialy ny sabata 03 Desambra 2011 lasa teo ny fanamarihana ny faha dimy taona nijoroan’ny Fiangonana Apokalypsy Alasora. Mialohan’ny fotoam-bavaka dia nisy ny filaharam-be niarahana tamin’ny pasitera Mailhol sy ireo delegasiona niaraka taminy, ary ireo mpino tonga teny an-toerana. Teo amin’ny By-pass izay filaharana izay no niainga ka nifarana teo amin’ny kianja maintso Alasora, toerana izay nanaovana ny fivoriam-bavaka. Ny Ray aman-dReny pasitera Mailhol ihany koa no nitondra ny toriteny tamin’io fotoana io ka ny tenin’Andriamanitra tao amin’ny Apokalypsy 2:1-5 no nivoitra tamin’izany.
Nisongadina tao anatin’izay toriteny izay ny amin’ny fitiavana voalohany eo amin’ny fifaliana amin’ny fanatontosana ny asan’Andriamanitra, ny finoana ary ny fanetren-tena, izay noamafisin’ny perikopan’ny fiangonana ihany koa (Ohabolana 15:28-33; Matio 15:21-28 ary I Petera 5: 5-9). Ireo tarika sy rantsana eo anivon’ny fiangonana Alasora no nanafana ny fotoana tapany hariva tamin’ny alalan’ny hira sy ny dihy izay isan’ny mampiavaka ity fiangonana ity ihany koa. Tonga nanotrona izay fotoana izay ihany koa ireo tompon’andraikitra ara-panjakana teo anivon’ny kaominina Alasora sy ny filoham-pokotany. Nofaranana tamin’ny fanapahana sy fizarana mofo mamy moa izay fotoana izay.
Raha tsiahivina kely dia tamin’ny taona 2006 no nitsangana ny fiangonana Apokalypsy Alasora ary 35 no isan’ny mpino tamin’izany. Efa in-telo nitarina anefa ny trano fivavahana tao anatin’izay dimy taona izay ary amin’izao fotoana izao dia mikasa hanorina fiangonana lehibe hafa mihitsy izy ireo satria efa tsy antonona ireo mpino ao an-toerana intsony izay trano fivavahana izay.
← Fitsidihana ara Pastoraly Paris – FRANCE
Fiangonana Itaosy →